Shah Rukh Khan ” Hadaan Nahay Sedexda Khan Qofba Qofka Kale Niyadiisa Ayuu Yaqaana” | Filimside –
Aug 5, 2017 - 4 Jawaabood
Sidaan wada ognahay Sedexda Khan ee kala ah Shah Rukh Khan, Aamir Khan iyo Salman Khan waa udub dhexaadka Bollywoodka sababtoo ah tan iyo markii ay bilaaweyn filim jilista ilaa iyo hada waa sedexda qof ee ugu awooda badan Bollywoodka dhan walbe.
” aniga labada Khans ee kala guul ayaan urajeya mar walba sido kale ayagana sidaa si lamid ah ayee ii rajeyaan, hadaan nahay Khanska nahay mudo dheer ayaan fanka kujirnaa, sidaa darteed atoorayasha marka ay fanka kucusubyihiin dabcan waxaa dhexmara wax la dhaho tartan qaasatan marka ay dadka ayaga hadal hayaan.”
SRK ayaa sidaa saxaafada u shegay mar ay wareysi dheer ka qaadayeen sido kale asigoo sii wata hadalkiisa wuxuu yiri,” hadii aad shirkadaan ka tirsantahay mudo dheer laba arimoodba wey iska cadahay inee dhacaan kuwaaso kala ah in dadka ay isla dhexmaraan in adigo mudo fanka kusoo jirtay la tartameyso qof fanka kucusub taasina sax ma aha.”
“sido kale in shaqsi si toos ah kuula yimaada adiga oo kudhaha waxaad cagta cagta usaartay dhalinta casriga cusub jirta hadeer taasina ayadana sax ma aha.”
” dhanka kale hadii dadka ay arkaan anigoo xidigo kale la fadhiya qaasatan dhalinta maanta jirta dadku wey la yaabayaan sababto ah aniga saaxiib lama ahi xidigahas waayo shaqsi ahaan iskuma naqaano ee shaqo ahaan unbaa isku naqaana.”
“Laakiin hadee dadka arkaan aniga, Aamir iyo Salman oo wada fadhina misane sheekeysanena dadka lama yaabayan waayo waxay ogyihiin inaa isku jiil nahay sifiicana isku naqaano tusaale ahaan hadii uu Aamir idhaho ‘saaxiib Filimkeygii Dangal wali ma aadan daawanin ee maxaa dhacay’? Anigana markaa waxaan kudhahay ‘Saaxiib waa runtaa wali ma aanan Daawan balse markaa fursad helaa daawana’ sidaa awged wuxu igu dhahaya ; Isoo wac markaa daawaneyso’
“xaqiiq ahaan waan wacay balse asiga markaas wadanka wuuba kabaxay oo dibada ayuu aaday, aniga iyo Aamir waligeen dhanka shaqada isuguma imaanin oo kama wada hadlin xataa waligeen isma dhihin saaxiib filimkaada ganacsi fiican masameyay iyo filimkaada wuu guuldareystay waxyaabahas waligeed isma aynan dhihin.”
“balse Salman hadii Filimkeyga ganacsi ahaan sifiican ushaqeyn waayo waa kii idhaha saaxiib maxaa kugu dhacay filimkaada ganacsi fiican ma sameynin, hadii aan Aniga hadlo Aamir waa qofka dhaqsida ifahma, hadii uu Salman hadlana aniga iyo Aamir waan fahamnaa marka sedexdeenaba dareen ahaan qofba qofka kale wuu dareensanyahay.”
Waxaa Aqriyay: 1,607
Akki zxpkii says:
NagadaaH calaacalka nio
waxas ayaa sxp tinimo kaa ah
Waraa shahru-khan boqor-ka bollyoowd-ka
Bilaash-loo-gu-ma bixin waa siyaasi-af-miishaara oo hadana caqli-ayuu-ku-darsaday
Si-ma-suuliyadi-ku-dhaahanthy-ayuu u-hadlay REALY(king/of-bollywood)
srk wuxuu wareysiga si gaara ugu dabaqaya xifaltankii isaga iyo ranveer Singh dhex Marat 2015 dilwale vs bajiro mastani isaga oo oranay qof fanka cusub waad wada tartami kartaan mise amir iyo sallu tageerayashoda ayuu raba iney filimkiisa dawadaan hhhhhh